Mr.IT - မြန်မာ နည်းပညာ ဖြန့်ဝေမှု
Mp3 music icon လေးအား ကိုယ်နှစ်သက်ရာ icon လေး ပြောင်းကြည့်ရအောင်နော်
Mp3 music icon လေးအား ကိုယ်နှစ်သက်ရာ icon လေး ပြောင်းကြည့်ရအောင်နော်။ လွယ်လွယ်လေးပါ My computer ကိုဖွင့်ပါ။ tools ထဲ က folder option ကိုသွားပါ။ ပြီးလျှင် File type အား click ကာခဏဆောင့်နေပါ။ပြီးလျှင် mp3 ဖိုင်လေးအားရှာကာ advance နိပ်ပါ။ ထို့နောက် change icon အား နှိပ်ကာကိုယ်နှစ်သက်ရာ Icon ပြောင်းလဲနိင်ပါပြီ။
မြန်မာ Gchat စကားဝိုင်း
အားလုံးစုပေါင်းကာပျော်ပျော် ရွှင်ရွှင်ဝိုင်းဖွဲ့စကားပြောတဲ့ အကောင့်လေးတစ်ခုပါ။ ၀င်ရောက်၇န် အတွက် အကောင့်တစ်ခုအားအပ်ရန် လိုအပ်ပါတယ်။ အကောင့်ကခဏနေရင်လက်ခံပါလိမ့်မယ်။ဒါဆိုရင် မြန်မာစကားဝိုင်းထဲကိုဝင်လို့ရပါပြီ။
ကိုယ်ပိုင်နာမည်လေးနဲ့ ၀င်ချင်လျှင် /alias name (name - ဆိုတဲ့နေရာမှာကြိုက်ရာနာမည်ပေး ၀င်ရောက်ပြောဆိုနိင်ပါပြီ။
အဆင်မပြေပါက Gmail : walonelay.spruz@gmail.com အား မေးမြန်းနိင်ပါသည်။
ပါတီအကောင့်မှာ [မြန်မာgchatစကားဝိုင်း]@partychapp.appspotchat.com အနီရောင်စသားတစ်ခုမကျန်ကူးကာ အကောင့်ထဲမှာအပ်ပေးရန်လိုအပ်ပါတယ် ခင်ဗျာ။ ကြိုဆိုပါ၏ မြန်မာစကားဝိုင်း။
Sony Ericson မှာ မြန်မာဖောင့်ထည့်မယ်။
မှာ ဒေါင်းပါ.. လုပ်နည်းက လွယ်ပါတယ်.. (လွယ်တယ်ဆို.. သေချာအမှားပြင်ပီးမှ တင်ပေးလိုက်တာကိုးဗျ)
၁။ rar ကိုတစ်နေရာမှာ ဖြည်လိုက်ပါ၊
၂။ A2 uploader ထဲက a2uploader.exe ကို run လိုက်ပါ၊
၃။ FileSystem Tool ကို နှိပ်လိုက်တဲ့အခါ "C" key နှိပ်ပီး ကေဘယ်လ်နဲ့ join ဖို့ပြောလာပါလိမ့်မယ်.. သူပြောသလိုသာ လိုက်လုပ်ပါ၊ အဲ့ဒီအခါ Driver တောင်းလာပါလိမ့်မယ်၊
၄။ driver တောင်းလာတော့လဲ ကြောက်စရာမလိုပါဘူး၊ USB Flash Driver ထဲမှာ ပါပီးသားပါ.. (ဒါတွေ ပီးလို့မှ System ထဲက Folder တွေ တက်မလာဘူးဆိုရင်တော့ A2 ကိုပိတ်ပီး အစဉ်အတိုင်း ပြန်လုပ်ကြည့်ပါ.. အဲ့ဒါမှ မရသေးဘူးဆိုရင် ခင်ဗျားရဲ့ မော်ဒယ်ကို ဒီ A2 က လက်မခံတာ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်.. ကျတော်လက်တွေ့စမ်းဖူးတာတော့ w595 ပါ)
၅။ tpa \_ preset \_ system \_ FONTS ထဲကို double-click နဲ့ အဆင့်ဆင့်ဝင်ရပါလိမ့်မယ်.. (သေချာအောင် အဲ့ဒီဖောင့်ထဲမှာရှိတဲ့ဟာတွေကို right click ခေါက်၊ read ဆိုပီး backup လုပ်ထားလိုက်ပါ) ပီးတဲ့အခါ ဒေါင်းထားတဲ့ fonts folder ထဲက ဖိုင်နှစ်ခုကို ဆွဲထဲ့ပေးရပါလိမ့်မယ်.. နောက်ဆုံးအနေနဲ့ Shutdown FS manager ကို နှိပ်၊ cable ဖြုတ်၊ ဓါတ်ခဲဖြုတ်ပီး ပါဝါခလုတ်ဖွင့်လိုက်ရုံပါပဲ..ဗျာ. .
ရမရသိချင်ရင်.. သီချင်းတစ်ပုဒ်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ပုံတစ်ပုံပဲဖြစ်ဖြစ်ကို ဖုန်းထဲပို့ကြည့်လိုက်ပေါ့.... ဟီးဟီး..
အပေါ်ကလင့်ခ်ကနေဒေါင်းလို့မရဘူးဆိုရင်တော့ Code: http://www.2shared.com/file/9070594/dc341b5f/SE_mmfont_by_sainyiphyogmailcom.html
2shared ကနေတင်ပေးလိုက်တာပါ၊ ကျတော့ဆီမှာ mediafire ရော၊ megaupload ရော၊ RS ရော ပိတ်ခံထားရလို့ပါ..
A2 uploader Support လုပ်တဲ့ platform နဲ့ model တွေကိုလဲ တစ်ပါထဲတင်ပြအပ်တယ်...
Supporting Platform:9 N/ l1 k1 G+ B% h1 u
C702, C902, G502, K630, K660, K850, V640, W595, W760, W890, W910, W902, W980, Z750, Z770, Z780, T700, TM506
C510, C901, C903, C905, G705, W705, W715, W995 C510, C901, C903, C905, G705, W705, W715, W995
(w595 မှလွှဲ၍ ကျန်သည့်ဖုန်းများအတွက် လုပ်နည်းတွေကို ထပ်တင်ပေးပါ့မယ်... အဲ့ဒီအတွက် အချိန်နဲနဲ ဆိုင်းပေးကြပါလားဗျာ. .. )
စမ်းသပ်ပီးဖုန်းမော်ဒယ်များ - w595, w910, c902, c905, t700
All format Total video converter
ဒါလေးကတော့ Format အားလုံးကိုပြောင်းပေးနိင်တဲ့ software လေးပါ။ ကျွန်တော်တော့တော်တော်လေးကို နှစ်သက်ပါတယ်
သူငယ်ချင်းတို့လဲလိုအပ်ရင်ဒေါင်းလော့ဆွဲလိုက်ပါနော်။ Exam ဖြေနေရလို့ post အသစ်မတင်ပေးနိင်သေးတဲ့အတွက်တောင်းပန်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
Download link :__
WEB Page အား PDF အဖြစ်ပြောင်းလဲခြင်း
ကျွန်တော်တို့ website တွေကို အင်တာနက်မရှိ တဲ့နေရာတွေကို ဖတ်ခြင်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်။တစ်ချို့ photoshop အကြောင်းလေးတွေ။ ကွန်ပျူတာအကြောင်းလေးတွေကို အချိန်မရွှေးပြန်ဖတ်ပြီးလေ့လာလို့ရအောင် PDF အဖြစ်ပြောင်းလဲသိမ်းထားရင် အချိန်မရွှေးပြန်ဖတ်လို့ရတာပေါ့တစ်ချို့ တွေက Cyber တွေမှာသူံးရတာ ဆိုတော့ အချိန်က ရှိတယ်လေ။ အဲ့တော့ကိုတွေ့တာလေးကို PDF ပြောင်းပြီး အိမ်ရောက်မှ အေးအေးဆေးဆေးဖတ်တာ ပိုအဆင်ပြေတာပေါ့။လုပ်နည်းကလွယ်ပါတယ်။
ဒါလေးကို Download လုပ်လိုက်ပါ။ပြီးရင် install တင်လိုက်ပါ။
2.printerေ၇ွှးတဲ့နေရာမှာ Universal Document Converter ဆိုတာလေးကိုရျွှေုးပြီး Ok ပေးပါ။ Save ရန်နေရာရွှေးပေးပါ။ အဆင်ပြေကြပါစေခင်ဗျာ...
ကျွန်တော်တို့တွေ Gmail ကို တစ်ခါဖွင့်တော့မယ်ဆိုရင် တော်တော် ဒုက္ခရောက်ကြတယ်ဗျ။ Connection က ကျ ပြီးတော့ (http:// ) pရဲ့ အနောက်မျာ (S) ထည့် ရနဲ့ အလုပ်ကိုရှုပ်နေတာပဲ။ အဲ့ဒီတော့ ကျွန်တော်က တော့တစ်ခုလုပ်ထားတယ်။ အဲ့ဒါကတော့ Richt click > Shorcut > ကို Click ပါ။ BOX တစ်ခုတက်လာလိမ့်မယ်ဗျ။ ပြီးရင် ဒီစာလေးကို ကော် ပီကူးလိုက်ပါ
ပြီး၇င် ခုနကတက်လာတဲ့ BOX ထဲ ကို Paste လုပ်ပါ။ ok ပေးပါ။ Gmail လို့အမည်ပေးလိုက်ပါ။ ပြီး၇င်အိုကေပေးပါ။ ပြီးရင် Double click နှိပ်ပြီး ဖွင့်ကြည့်လိုက်ပါ။ ပိုမိုမြန်ဆန်စွာ ပွင့်သည်ကိုတွေ့နိုင်ပါလိမ့်မယ်။
Window Genius Removal
ကဲ internet ချိတ်ပြိး အော်တို update ပေးထားရင် တက်တက်လာတတ်တဲ့ window genius ဆော့ဝဲကို Rum မိတော့ 15မိနစ်တစ်ခါလောက် restart လာလာတောင်းတတ်တယ်ဗျ။ အဲ့တော့ စိတ်ရှုပ်ဖို့ကောင်းတယ်။ အရင်တုန်းကတော့ ဒီ software ကတော်တော်လေးကောင်းပါတယ်။
အခုတော့ ဘာမှအသုံးမ၀င်သလိုဖြစ်နေတဲ့အပြင် အလုပ်လဲ ရှုပ်လာတယ်ဗျ ။အဲ့ဒါကို Remove လုပ် ချင်ရင်လဲအလွယ်လုပ်လို့မရဘူးလေ။အခုတော့ manual နည်းလမ်းတစ်ခုရလိုက်တယ်။ လွယ်ပါတယ်။
Start ထဲက Run Box အားခေါ်ပါ။ ပြီးရင် CMD လို့ရိုက်ပါ။။။
အဲ့မှာ Command box တစ်ခုတက်လာပါလ်ိမ့်မယ်။။။။။ တက်လာရင် ဒီစာလေးကို copy ကူးပြီး command box ထဲမှာ Right click > paste
ပေးပါ။။ ဒါပြီးရင် Restart ချပါ ။ အကုန်အဆင်ပြေသွားပါလိမ့်မယ်။။။။
rename wgatray.exe wgatray.exe.bak
rename wgalogon.dll wgalogon.dll.bak
rename LegitCheckControl.dll LegitCheckControl.dll.bak
taskkill /F /T /IM wgatray.exe
Disk Icon လေးတွေပြောင်းရအောင်
သူငယ်ချင်းတို့ရေ mp4 လေးတွေ Stick လေးတွေ ကိုကွန်ပျူတာကို တပ်လိုက်ရင် ကို Stick လေးကို ကြိုက်ရာ icon ပုံထားလို့ရတယ်လေ။
အရင်ဆုံး notepad ကိုခေါ်ပါ။
ပြီူးရင် ( .inf) လို့ Save လုပ်ပါ။ ဥပမာ။။။ Disk.inf
ပြီးရင် icon လေးတစ်ခုနဲ့ ခုနကရေးထားတဲ့ inf လေးကို ကော်ပီကူးထည့်လိုက်ပါ။ ပြီးရင် Stick လေးကိုဖြုတ်ပြီးပြန်တပ်လိုက်ပါ။ iconလေး ချိန်းနေ
တာကိုတွေ့ရမှာပါ။ heardisk ထဲမှာဆိုရင်တော့ ကွန်ပျူတာကို restart ချလိုက်ပါ။။။
ကျွန်တော်သိသော မြန်မာတို့၏ ၀က်ဆိုက်များ